श्रीमान विदेश, श्रीमती घरमा यस्तो अबस्था भेटीए पछि..!!! बाग्लुङ्गमा मध्यरातमा यस्तो भयो (भिडियो ) « Np Online TV
श्रीमान विदेश, श्रीमती घरमा यस्तो अबस्था भेटीए पछि..!!! बाग्लुङ्गमा मध्यरातमा यस्तो भयो (भिडियो )
मा बाग्लुङमा एउटा कहालीलाग्दो घटना सार्वजनिक भएको छ । श्रीमान बिदेशमा भएको बेलामा यता नेपालमा श्रीमती परपुरुषसँग रंगेहात समातिएकी छन् ।उनलाई आफन्तले बितारामै भेटेपछि घटनाले डरलाग्दो मोड लिएको हो । छोरी बिरामी भएर बुहारीकोमा कुखुरा लिन जाँदा सासुले परपुरुषसँग भेटेपछि घटना सार्वजनिक भएको हो । सासुले किन बुहारी यस्तो गरेको श्रीमान बिदेशमा छन् यस्तो किन गरेउ भन्दा बुहारीले उक्त केटालाई झ्यालबाट भगाउन सफल भइन ।
उनले बुहारीलाई यस्तो गर्न हुँदैन भनेर धेरै सम्झाइ बुझाइ गरिन, यस्तो गर्दा आफ्नो घरपरिवार बिग्रिन्छ भनेर उनले सम्झाएको कुरा मिडियामा भनेकी छन् । घरमा कोहि आउछ त्यो सबैलाई थाहा हुन्छ तर बच्चालाई सेतो कम्बल ओडाई राखेको र आफु दुइ जना रातो कम्बल ओडेर सुतेको मैले देखे भन्दै सासुले मिडिया समक्ष भनेकी छन् । घटना सार्वजनिक भएपछि उनले देहत्याग पनि गरेकी छन् । बाकी तलको भिडियोमा हेर्नुहोस: